ကြက်ဥဟင်းတစ်မျိုး eggs | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ကြက်ဥဟင်းတစ်မျိုး eggs
Posted by weiwei on Dec 8, 2010 in Food, Drink & Recipes | 12 comments
ကြက်ဥချက်နည်း ပဒေသာကျမ်းကြီး ဓါးပြတွေနောက်ပါသွားပြီးကထဲက စိတ်နာနာနဲ့ အသစ်ပြန်လည်မပြုစုဖြစ်ပါဘူး။ တစ်ခါတစ်လေတော့ အသက်ဆက်ထားခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးရှင် ကြက်ဥကို အမှတ်တရ ပြန်လည်ချက်စားပါတယ်။ မနေ့ကချက်စားတာကို မှတ်တမ်းတင်ထားရင်း ကြက်ဥချက်နည်း ပဒေသာကျမ်းကို ပြန်လည်စတင်ပြုစုပြီဖြစ်ပါကြောင်း အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
ကြက်ဥ (၄) လုံး
ကြက်သွန်နီ ခပ်သေးသေးတစ်လုံး (သို့) ခပ်ကြီးကြီးတစ်ခြမ်း
ခရမ်းချဉ်သီး ခပ်လတ်လတ် ၂ လုံး
ငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့ နံနံပင် အလိုရှိသလောက်
ဆား .. ငရုတ်သီးအစိမ်းမှုန့် .. ငံပြာရည် ..
ဒယ်အိုးထဲ ဆီလိုသလောက်ထည့်ပြီး ကြက်သွန်ဖြူနီထောင်းတာကိုထည့်ပြီး မွှေးလာသည်အထိ ဆီသတ်ပါ။ ထို့နောက် ငရုတ်သီးအစိမ်းမှုန့် အနဲငယ်ထည့်ပါ။ ထို့နောက် ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ ငံပြာရည် ဆား ထည့်ပြီး ခရမ်းချဉ်သီးများကြေလာသည်အထိ စိတ်ရှည်ရှည် မွှေပေးရပါမယ်။ ထို့နောက် ကြက်ဥပြုတ်ကို ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း အလယ်မှ ထက်ပိုင်းဖြတ်ထားသည့်အတိုင်း အိုးထဲထည့်ပြီး အားလုံးအရသာနှံ့သွားအောင် ချက်ရပါမယ် … ငရုတ်သီးစိမ်းအနံ့ပျောက်တဲ့အထိခဏချက်ပြီး မီးပိတ်ပြီး နံနံပင် အုပ်လိုက်ရုံပါပဲ ..
အခုချက်တဲ့အထဲမှာတော့ နံနံပင် ကုန်နေလို့ မထည့်လိုက်ပါဘူး ….
ဒီဟင်းရဲ့ အားသာချက်က ဈေးသက်သာပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးက ကျန်းမာရေးကို ကောင်းစေပါတယ်။ ချဉ် ငံ စပ် အရသာ ၃ မျိုးလုံး ဟင်းတစ်ခုထဲမှာပါသွားလို့ ဟင်းတစ်ခွက်ထဲနဲ့ ထမင်းစားလို့ရပါတယ်။ ပန်းကန်ထဲမှာ ထည့်ထားရင်လဲ စားချင်စဖွယ်လှပလို့ ကလေးတွေကိုကျွေးရတာလဲ လွယ်ကူစေပါတယ် …
တရုတ်ပြည်မှာ ကြက်ဥ ဈေးသက်သာပါတယ် … ဘာကိုမဆို အချိန်နဲ့ရောင်းကြတယ် .. ကြက်ဥအမျိုးအစားကိုလိုက်ပြီး တစ်လုံးကို ၅၀ ပြားကနေ ၈၀ ပြားတန်လောက်အထိ ရှိပါတယ် … ဗမာငွေ ၇၀ ကျပ်ခန့်ပဲ ပေးရတယ် …
အားပါး ကျွန်တော်ကကြက်ဥကြိုက် တယ်ဗျ သြော် ..ဆေးဘဲဥလုပ်နည်းလေးပါလေး တင်ပေးပါလားဟင် ကျေးဇူးပြု ပြီး
Thanks making info.^.^
ကြက်ဥ ခေါက်ကြော်ဘဲ စားချင်တယ်
ကြက်ဥပဒေသာကျမ်းက အခုမှ စထားတာလေ … ဖြည်းဖြည်းပေါ့ …
ဘဲဥက .. ဘယ်ရောက်နေပါသလဲ..။
ဘဲဆိုတာက ..တရုတ်ပြည်မှာပဲ ..ပေါပေါများများရှိတယ် ထင်ထားတာ..
မမဝေ .. အဆင်ပြေရင် ကြက်ဥပေါင်းချက်နည်းလေးပါ တင်ပေးပါနော်။
တရုတ်ပြည်မှာ ဘဲဥကို ဒီအတိုင်းရောင်းတာမတွေ့မိသလို ဟင်းအနေနဲ့လည်း ချက်စားတာ မတွေ့မိပါဘူး … ဘဲဥကို အငံနဲ့ ဆေးဘဲဥ လုပ်ပြီးသားတွေပဲ ရောင်းကြပါတယ် … တစ်လုံးကို တစ်ရွမ်ပေးရတယ် ..
ဘဲပေါင်းနည်းလုပ်ပါဗျို့။ ကြက်ဥဘဲဥချက်လို့ မန်ကျီးရည်မထည့်ရင် ဥကပျော့တယ်လို့ကြားဖူးတယ်။ မဝေဟင်းမှာ ဘာကြောင့် မန်ကျီးရည်မထည့်တာလည်း၊ အရသာပြောင်းသွားလို့လား။ ငါးဖယ်ကျော် ရောထည့်ရင် ပိုဂွတ်တယ်။
အရင်တုန်းက ကြက်သားနဲ့ဝက်သားကို နှစ်မျိုးရောချက်ဖူးတယ်။ မဆိုဘူးကောင်းတယ်၊ အားသာချက်က တခါထဲနဲ့ တူးအင်ဝမ်း အရသာမိတယ်။ စာကြည့်ကြပါလား နောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ ကိုယ်စိတ်ကူးတဲ့ရာပေါ့ အမဲနဲ့ဆိတ်၊ ဆိတ်နဲ့သိုး နှစ်သက်ရာတွဲကြည့်ပေါ့။
economy first ..
ချွေတာရေးလုပ်ပြီး ကြက်ဥစားရတာလေ …
မန်ကျီးသီးက အလွန်ဈေးကြီးတယ် … တစ်ခါတစ်လေ မန်ကျီးသီးနဲ့ချက်ရင် ခရမ်းချဉ်သီးမထည့်ပဲ မဆလာနဲ့ချက်တယ် … အဲဒါလဲ စားလို့ကောင်းတယ် …
အိမ်မှာ အဲဒီလို ချက်ရင် ပုဇွန်ခြောက်မုန့် ထည့်ချက်တယ်။ ဆူးက ဥပြုတ် တာဆို မစားဘူး.. ပုဇွန်ခြောက်မုန့်ပါတော့ အနှစ်ပြစ်တော့ အနှစ်ကြီးဘဲ ခပ်စားပလိုက်တယ်။
မြန်မာပြည်မာ ကြက်ဥတစ်လုံး ၁၂၀ တော့ ပေးရတယ်။
မရှိတဲ့သူတွေအတွက် အလွန် ကြပ်တည်းပါတယ်။
ကိုယ့်ထက်ဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံလဲ မရှိတော့သလောက်ပဲ။
သယံဇာတ မထွက်လို့ စိုက်ပျိုးမရလို့ ဆိုလားတော့ မဟုတ်ပြန်ဘူး။
ဘာလို့ ဒီလို ဖြစ်သွားရတာလဲ…???